Ny sakafo Peroviana - Ny sakafo Peroviana
Ny sakafoko Peroviana
Peru dia firenena iray Amerika Atsimo mandrakotra faritra midadasika amin'ny alan'i Amazonia ary misy ny iray amin'ireo tanàna Inca tranainy indrindra amin'ny haavo Ny Andes. Fanampin'izany, tompon'ny Lohasaha Masina, Lalana Inca efa an'arivony taona lasa izay, asa tanana malaza sy harenan'ny fanjanahantany ary tahiry arkeolojika lehibe indrindra ao amin'ny kaontinanta izay mampahafantatra ny kolontsainy, ny fomban-drazana ary ny tantarany.
Toy izany koa, io faritany io no namorona sy nialoha ny iray amin'ireo sakafo tsara indrindra eran-tany, izay miresaka sy mifandray amin'ny tsirony sy ny fombany tsy manam-paharoa ireo toetran'ny fireneny, ny fitiavana sy ny fanoloran-tenan'ireo mpandika teny ary ny fahafahana an'arivony hankafy ny fijanonana ao. Peru amin'ny fofona sy ny kaikitra rehetra.
Ity gastronomie ity dia ny fitambaran'ny sakafo sy zava-pisotro manokana Peru izay ampahany amin'ny fiainana sy fomban-drazana iombonana amin'ny mponina ao aminy, vokatry ny fampifangaroana ny fomban-tsakafon'ny tanàna taloha miaraka amin'ny gastronomie Eoropeana sy ny sampana hafa izay nampidirina tsikelikely taminy.
Recipe ho an'ny akoho miaraka amin'ny ovy sy voatabia mena
Ny akoho dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny ankamaroan'ny sakafo amin'ny gastronomy Peroviana, izay ...
Recipe Adobo Pork
Azonao sary an-tsaina ve ny lovia manankarena sy malefaka ary be ranony? Raha izany no izy dia ny Pork Adobo no safidy tsara indrindra ho anao. Na ho an'ny...
Ny akoho Sillao no fanehoana lehibe indrindra amin'ny fandraisan'anjaran'ny sakafo tatsinanana sinoa amin'ny bokin'ny fomba fanamboarana sy ...
Soup amin'ny minitra
Ny lasopy a la minuta dia lasopy vita an-trano tsy lafo, maivana ary haingana, izay ny fomba fahandro dia ...
Ny Chicken Escabeche dia sakafo mahazatra amin'ny gastronomy Peroviana, izay tonga any amoron-tsiraka amin'ny alàlan'ny ...
Red tagliatelle fomba fahandro
Ny tantaran'ny lovia paty mena malaza dia hita taratra teo anelanelan'ny taona 1840 sy 1880 raha be dia be ny ...
sakafo maraina tsy nampoizina ho an'ny ankizy
Fotoana tsara hanaovana sakafo maraina tsy nampoizina ny fotoana rehetra, ary vao mainka aza izany rehefa tarihina ity sakafo matsiro ity...
Carapulca miaraka amin'ny lasopy maina
Carapulca miaraka amin'ny lasopy maina dia lovia Peroviana izay, araka ny tantaran'ny mpanoratra sy mpikaroka gastronomika maromaro, dia ...
Patarashca an'ny ala
Ny Patarashca an'ny ala dia lovia izay ny fiaviany dia nomena ny aborigène sy ny mponina ao Però taloha ...
Mety tsy ho fantatra mihitsy ny tena niavian’ny ceviche, satria lovia iadian-kevitra ho azy ny firenena maro...
Etsy andanin’izany, anisan’ny iray amin’ireo karazan-tsakafo ireo Zava-dehibe indrindra eto an-tany ary ohatra iray amin'izany fusion cuisine noho ny tantarany maro kolontsaina lava, izay mifototra amin'ny fifangaroan'ny fahalalana fototra ao Però fahiny miaraka amin'ny nahandro Hispanika amin'ny variana matanjaka indrindra, ny fisian'ny Andaloziana sy ny fandraisan'anjaran'ny morontsirak'i Atlantika atsimon'i Sahara an'ny andevo rehefa nahita ny nitranga ny faritra.
Eo amin'izao tontolo izao, ny nahandro tany am-boalohany ao Però no isan-karazany indrindra hatramin'izay, izay, noho ny boky "57 vonona ny hahatakatra hoe manao ahoana isika Peroviana” dia isaina hatramin'ny 491 sakafo mahazatra. Manaraka ny morontsirak'i Peroviana dia misy 2500 karazana lasopy, ary koa tsindrin-tsakafo nentim-paharazana maherin'ny 250 sy zava-pisotro voajanahary 70 miaraka amin'ny fanomanana zava-pisotro misy alikaola. Saingy, hanontany tena ianao hoe nahoana no misy ireo karazan-tsakafo ireo? Ary ny valiny dia isaorana ny jeografia mampiavaka ny firenena amin'ny tanana fifangaroana ara-kolontsaina ary ny fampifanarahana ny eruditions fahiny hafa amin'ny sakafo maoderina.
Ny takelaka tsirairay dia misy tsiro malefaka, ny sasany mifandray kokoa amin'ny sehatra namoronana azy, toy ny tsiron'ny Mar, ny fanasin’ny tora-pasika ary na dia ny loko sy ny fofon’ny zava-drehetra rakotry ny masoandro mamirapiratra aza. Raha toa ka tendrombohitra, mangatsiaka sy tsiro miaraka amin'ny fahafinaretana kely kokoa miaraka amin'ny voninkazo, ravina ary singa hafa izay mamelona indray ny fahatoniana sy ny fahatonian'ny natiora. Ary kosa, amin'ny azy faritra afovoany, izay ilay voahodidin'ny tranobe, ny hetsika ara-kolontsaina ary ny tontolo ekliptika kokoa, ny sakafo misy futuristic sy tsy mampino rivotra dazzles amin`ny textures, fifanoherana ary na dia sarotra amin`ny endrika sy ny loko.
Tsy lavitra ny hanandrana izany rehetra izany anefa, satria ny haino aman-jery vahiny no manome fahafahana mahafantatra sy mihinana sakafo nentim-paharazana ary ny fitakiana nasionaly ao anatiny sy ivelan'i Peroa ho an'ny sampana samihafa na trano fisakafoanana iraisam-pirenena, izay ahafahan'ny mponina, mpitsidika ary vahiny, hanandrana, hahafantatra ary hahatsiaro ny tsiron'ity tany lehibe ity.
Toy izany koa, pejy fampahafantarana, media ary tambajotra sosialy, ary koa ny fitaovana audiovisual hita ao amin'ny tambajotra sy ny sora-baventy nomerika ho an'ny daholobe dia misy foana mampiseho ny fiomanana sy ny fampitandremana fa ny zavatra rehetra azo noforonina dia ho fialan-tsiny ilaina mba hijerena azy ireo sy hanohizana ny famoronana.
Amin'ity toe-javatra ity ary mba hahazoanao ny fomba hankafizanao, manomana ary mizara ireo lovia, zava-pisotro, tsindrin-tsakafo, lasopy, maina. Toaka sy toaka, myperuvianfood manolotra anao malalaka lisitry ny recipe, fanomanana sy famantarana mba hahafahanao manandrana ny hanim-py sy ny hatsaran'ny tsiron'ny Peru mahazo anao.
Ity dia tranonkala manokana amin'ny fampirantiana fitaovana malalaka sy voamarina amin'ny samy hafa fomba fanamboarana, voalamina tsara daholo ka tsy mila mahandro mahay ianao vao mahatratra ny haavon'ny famonoana ireo chef malaza amin'ny Peru. Na izany aza, midira lalindalina kokoa amin'ity fanoratana ity ary fantaro ny safidy sy ny tombontsoa azo avy amin'izany myperuvianfood ho tonga ianao
Araka ny nampianarina teo aloha, myperuvianfood aseho ho a interface tsara an-tserasera feno fanomanana maro amin'ny lovia marika, nentim-paharazana ary malaza indrindra ao Però; ary koa ny sakafo hafahafa, sahisahy, tranainy, maoderina eny fa na dia amin'izao fotoana izao aza, izay natolotry ny tanàna iray manontolo ho antsika ary efa maro no nivoatra mba hanintonana sy hampitolagaga antsika amin'izao fotoana izao.
Ity pejy ity dia manana milina fikarohana izay misy lehibe katalaogy votoaty. Amin'ity tranga ity dia hojerena izany fanomanana, fomba fahandro, tsikelikely toromarika, ary koa ny fitantarana fohy momba ny tantara sy ny zava-misy mahaliana momba ny sakafo isan-karazany izay zaraina araka ny toerana fanomanana sy ny fomban-drazana.
Amin'ny fomba manaraka, ny votoatin'ny pejy ary ny fizarana azy:
Fanampin'izany, manome milina fikarohana manokana izay ahafahanao miditra hikaroka andalana samihafa amin'ireto sokajy an-dakozia ireto:
Ity dia fomba an-dakozia vao haingana Peru satria maka recettes avy amin'ny lasa prehispanic hamerenana azy ireo, hanavotra sy hanome lanja ireo akora voajanahary eto amin'ny firenena. Tonga eto ny sakafo teratany toy ny tarwi, chuño, quinoa, kiwicha, moraya, cochayuyo, maca, coca ary gisa.
Amin'ity karazan-tsakafo ity, ny milina fikarohana dia manipy ireo lovia rehetra izay misy ny vary ho mpiara-dia sa tena, ho tena ingredient. Misaotra ny Fifindra-monina Sinoa Kantonese, ny tsiro avy any Azia dia nitambatra ary niteraka fomba fanamboarana hafa izay aseho ao anatin'ny pejy web toy ny avy any Però tanteraka fa manana faka sy fitsabahana avy amin'ny firenena hafa amin'ny ambaratonga kely.
Ny harenan'ny trondro Ao amin'ny biby ao Però, dia lehibe izy ireo, noho izany dia nifanaraka tamin'ireo harena voajanahary ireo ny sakafo. Anisan'izany karazana chupe izany, toy ny ceviche, chalaca-style mussels, tiradios ary seco.
Ny sakafo kreôla dia manana ny vanim-potoana voalohany ny Taonjato faha-XIX ary karazana teratany any amin'ireo tanàna amorontsiraka tamin'ny andron'ny Viceroyalty of Peru. Aseho eto ny sakafo rehetra eo anelanelan'ny taonjato XNUMX sy XNUMX miaraka amin'ny teknika, tantara ary fitaovana manokana.
Ao amin'io faritra ambony amin'ny firenena io, toy ny dia ny Andes, ny sakafo dia mifototra amin'ny ovy, katsaka ary legioma miaraka amin'ny fampidirana vary, mofo sy paty ary hena toy ny lama, alpaca ary bibidia. Mifototra amin'ireo akora ireo dia ny fomba fanamboarana izay atsipy ny pejy ho an'ny mpanjifa dia novolavolaina
Avy any anaty ala
sakafo rehetra miaraka akanjo, saosy ary ranon-javatra Izy io dia mifanitsy amin'ny lovia any anaty ala, izay miaraka amin'ny anana maina sy masaka na tsy dia mazava loatra.
Amin'ity safidy ity dia ampidiro ny hafa cocktails sy zava-pisotro misy alikaola. Ary koa ny fanomanana rehetra izay misy solids miaraka amin'ny divay na vokatra hafa masirasira.
Ingredients ho azo
Ao anatin'ny pejy dia azonao atao ny mikaroka ny fomba fikarakaranao mifototra amin'ny fanentanana lehibe mampiasa, izay haneho ny rehetra misy formulas amin'ity vokatra kintana ity.
ireo akora tadiavina indrindra ary ampiasaina dia aseho tsy ho ela, noho izany dia manana hevitra ny amin'ny zavatra tokony hotadiavina ianao, mifanaraka amin'ny zavatra ampiasaina matetika amin'ny fanomanana Peroviana.
Trondro, akorandriaka ary crustaceans
kisoa guinea na kisoa guinea
Ny sakafo rehetra avy any Però dia zava-dehibe fotsiny ho an’ny vondrom-piarahamonina eto an-toerana sy iraisam-pirenena, na noho ny tantarany, ny marika na noho ny tsirony miavaka sy tsy manam-paharoa.
Na izany aza, misy ny sasany amin'ireo lovia izay misongadina kokoa amin'ny maha-izy azy vakoka sy fomban-drazana ao an-tanàna. Ny sasany amin'izy ireo dia hita ao anaty myperuvianfood ary nofaritana tamin’ny faharetana sy ara-potoana izy ireo; toy izao ny anaram-boninahiny:
vary akoho amam-borona
Voankazo volomparasy sy quinoa
katsaka volomparasy chicha
Inona avy ireo fomba fanamboarana milina fikarohana?
myperuvianfood misy boky momba ny fomba fahandro misy mihoatra ny 100 formulas zaraina araka ny karazana lovia na zava-pisotro ho entina. Izany dia mikendry ny fampahafantarana ny zava-mahatalanjona ny nahandro Peroviana, ny hanim-piny, ny tsirony, ny tsy miovaova, ny hanitra ary ny torany, izay manome fahafahana ny mponina sy ny mpitsidika mba diniho ny tantarany sy ny fomban-drazana amin'ny famelabelarana tokana.
Toy izany koa, ity dia tranonkala iray izay mikendry ny hamela ny mpikaroka tsirairay manomana sakafo isan-karazany amin'ny fampiononana na aiza na aiza misy anao, miaraka amin'ny akora tsotra sy matsiro indrindra ary amin'ny habetsahana tianao, ka tsy ilaina ny mandeha any amin'ny trano fisakafoanana ary manafoana ny fandaniana avo lenta ho an'ny sakafo an'ohatra sy manetry tena izay omen'ny tanànan'i Però.
Toy izany koa, izy dia fitaovana iray izay manipy ny mpitsidika azy rehetra, fomba fahandro tena mora izay tsy miaraka mila chef za-draharaha indrindra ianao mba hamoahana azy ireo. Ny hany ilaina dia manomboka amin'ny fandikana sy fifantohana tsara rehefa mahandro, ny akora rehetra ary ny fihetsika tsara rehefa manomboka.
Raha misy faniriana hanao fifandraisana amin'ny lampihazo, myperuvianfood has a fomba fifandraisana tsotra sy mahazo aina mba hanehoanao ny fisalasalanao, ny olanao na ny fanirianao amin'ny mpanara-maso sy ny mpitantana ny tranonkala, izay hamaly ny fangatahanao na ny tombontsoanao amin'ny fotoana iray mba hilamina ny fijanonanao sy ny filanao.
Ity media ity dia aseho ho a teny izay voarafitra toy izao:
anarana: Ilaina ity data ity mba hanomezana anao a maha- amin'ny tompon'ny fangatahana, toy izany koa ny fepetra takiana amin'ny fanondroana ilay olona raha misy valiny na mitaky fiheverana.
namany Sary elektronika: Ny tompon'ny pejy izy ireo no handefa ny valiny amin'ny mailakao, izany no maha zava-dehibe ity adiresy ity
raharaham-barotra: Ity no toerana hanendrena anao a foto-kevitra na hevitra momba ny hafatra. Kely ny toerana misy azy ka tokony ho fohy sy mazava ny famaritana
Message: Amin'ity toerana ity dia azonao atao milaza izay mety ho fahasahiranana na filàna tokony hotsabahanao. manana a Toerana malalaka izay ahafahanao maneho amim-piononana sy malalaka izay rehetra mampahory anay. Fa na izany aza, soso-kevitra ny ho voafaritra sy amin'ny antsipiriany amin'ny olana na fanontaniana
Ny fomba fanamboarana sakafo Peroviana tsara indrindra